निन्द्रा समस्याहरू - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
लिओना ल from्गबाट ​​प्रशंसापत्र
म मेरो डेभिड प्रयोग गर्दैछु प्रसन्नता प्रो लगातार दुई महिनासम्म। YEARS को लागी मलाई निदाउन गाह्रो भयो। मेरो घरमा प्रवेश गर्ने कसैबाट मेरो सपनाहरू थिए। धेरै वर्षहरुमा म रातमा निदाएको थिएन। म शहरबाट अलास्का सरे पछि पनि मलाई निदाउन गाह्रो भइरहेको थियो। जब म पूर्ण रूपमा सुरक्षित थिएँ, मलाई अझै सुत्न गाह्रो भइरहेको थियो। मेरो एक चिकित्सकको दाउदले दाऊदलाई सुझाव दिए प्रसन्नता प्रो। मैले खर्च गरेको सबै भन्दा राम्रो पैसा। कस्तो रमाइलो! अब मैले गर्नुपर्ने भनेको भनेको सुत्नुभन्दा पहिले सेसन प्रयोग गर्नु हो। म प्राय: चिन्ताको सत्रको लागि राम्रो महसुस गर्छु। म निदाउँछु र एक बर्ष भन्दा बढीमा पहिलो पटक ताजा भएर उठ्छु। साथै, मेरो चिन्ता धेरै हदसम्म कम भएको छ र म बढी आराम महसुस गर्छु। अब जब म राती सुत्न सक्दछु, मेरो मुडमा सुधार आएको छ र म धेरै राम्रो महसुस गर्छु। म खुशी छु र वरपर हुन अझ रमाईलो छु। धन्यबाद, डेभिड! (डेभिड सीभर र डेभिड प्रसन्न प्रो)
जोन केलीबाट प्रशंसापत्र
पछिल्लो रात म medication घण्टा सम्म कुनै औषधि वा सप्लीमेन्ट बिना नै सुत्थें, जबकि गत हप्ता म केवल १ देखि hours घण्टा रातमा १ र hours घण्टा प्राप्त गर्न सक्थें जहाँ प्रत्येक औषधि र पूरकको पहुँच थियो जुन मानिसलाई थाहा थियो! त्यसोभए, म मेरो परिवार, साथीहरू, एक्स-बिरामीहरू र विश्वलाई यो अविश्वसनीय खोजीको बारेमा भन्न पर्खिन सक्दिन।
“प्रोग्रेसिभ एमएस र क्रोहन्स रोगको सिकार भएको कारण मलाई औषधीहरू प्रयोग गर्नु बाहेक अरू केही विकल्प छोडिएको छैन तर धेरै जना भएपछि मलाई लाग्यो कि गैर-औषधी सम्बन्धी केहि गर्न चाहानुहुन्छ।
मेरो धेरै लक्षणहरु मध्ये एक निद्रा विकार हो। विशेष बिहानमा म तीखा डरलाग्दो निद्राबाट वञ्चित रातहरूमध्ये एकबाट उठें जुन टाउकोको गम्भीर दुखाइ र दबाब, र पक्कै पनि थकान थियो। म बिरलै सार्न सक्छु। मेरो साथीले सुझाव दियो कि म उसलाई प्रयोग गर्छु डेभिड प्रसन्न प्रो; म धेरै संशयवादी थियो। वर्षौंदेखि मैले विभिन्न स्व-मद्दत उपचार ग्याजेटहरूमा धेरै पैसा खर्च गरें जसले राहत दावी गरे, निराश मात्र रहन। म त्यो बिहानी भयानक तरिकामा थिएँ, र निराश भएर मैले प्रयास गर्ने निर्णय गरें डेभिड प्रसन्न प्रो। मैले एक 'उत्साहित' सत्रहरू प्रयोग गर्‍यो र समय समाप्त हुनुभन्दा अघि मैले 80० प्रतिशत राम्रो र १०० प्रतिशत उत्साहित, स्पष्ट दिमाग र सत्र पूरा भएपछि खुशी भएको महसुस गरें! वाह!
यदि मैले आफैले यो प्रयत्न नगरेको भए म यसलाई विश्वास गर्न सक्दिन! ”
केभिन पी बाट प्रशंसापत्र।
"म प्रयोग गर्दै छु मन जिउँदो ओएसिस प्रो पछिल्लो केहि महिना को लागी र मेरो चिन्ता र निद्रा समस्याहरु संग उपकरण धेरै उपयोगी हुन पाए। मैले शान्त प्रभावहरू तुरुन्तै महसुस गरें र केही हप्ताहरूमा मेरो औषधी घटाउन सक्षम भएँ, मैले साथीहरू र परिवारलाई सिफारिस गरेको छु। ”
DWP बाट प्रशंसापत्र
".5.0.० मध्ये out ताराहरू। एक राम्रो निर्माण गुणवत्ता मशीन।
डेभिड प्रसन्न प्लस राम्रोसँग प्याक गरिएको र अनावश्यक प्रत्येक टुक्रा राम्रो-पेशेवर गरीएको थियो। म्यानुअल पढ्दा, मैले निर्देशनहरू क्रमबद्ध फैशनमा गरिएको थियो-कुनै पनि वरिपरि जम्पि।। साथै, म्यानुअल निर्देशनका धेरै अंशहरू नरम रंगहरूमा राम्रोसँग हाइलाइट गरिएका थिए। रंगहरू पढ्नको लागि रुचि राख्छन्, आँखामा नरम प्रकार। मैन्युअल मञ्चमा एक पाँच सितारा दिन्छु।
धेरै राम्रो देखिने मेसिन। म एकाईको क्वालिटीबाट धेरै खुसी छु। चश्मा सुपर उत्कृष्ट छ र ती मा एक राम्रो नरम रंग छ, हेडफोन धेरै राम्रो गुणवत्ता को हो, धेरै राम्रो आवाज उनीहरु बाट आउँदैछन्। को प्रसन्न प्लस मूल्य मूल्य र प्रतीक्षा लायक छ।
मेसिन आफै राम्रो डिजाइन गरिएको छ। म मुटुको धडकन ठीक गर्छु म सास फेर्न मद्दतको लागि उपयोगी हुनको लागि मैले यसलाई मास्टर नगरेसम्म। त्यसो भए यो उपयोगीमा आउँदछ।
मसँग धेरै सक्रिय दिमाग छ, सँधै सोच्दछु, त्यसैले मलाई लगातार धेरै रातहरू सुत्न गाह्रो लाग्छ। म हिजो राति निदाइनँ, त्यसैले मैले डिललाईट प्लसलाई द्रुत परीक्षण ड्राइभ दिएँ। मैले ओछ्यानमा पल्टें, चश्मा, हेडफोनमा स्लिप भयो र मेसिनमा स्विच गरें, मैले यसलाई ध्यानमा राखें। केही मिनेट वा त्यस पछि, म भुल्दै जाँदै थिएँ, तर म बाहिर जानुभन्दा अघि मैले मेसिन बन्द गरेर ओछ्यानबाट ओर्लें। त्यो सब भन्दा छिटो हो मलाई सुत्ने बेलामा मात्र सुन्दर। डिललाईट प्लससँग यसमा निर्मित नरम अन र सफ्ट अफ मेकानिजम छ। यो बिस्तारै तर स्थिर रूपमा आवाजहरू उठाउँदछ जब सुरू हुन्छ, सत्रको अन्त्यको नजिकै हुँदा आवाजहरूलाई कम बनाउँछ। यो अचानक ठूलो स्वरले शुरू हुँदैन, वा अचानक बन्द हुन्छ। राम्रो सोचेको।
साथै, मेशिन आफैंमा, एक औसत आकार मैन ह्यान्डमा फिट हुन्छ, सायद प्राय शर्टको जेबमा फिट हुनेछ।
मैले यो मेसिन किनेको थिए र मेरो आँखाको गोबरहरू रातमा टक लाउन आवाज निद्राका लागि। यस्तो देखिन्छ कि यो मेसिनले यसलाई गर्न गइरहेको छ। म खरीद अनुभव संग धेरै राम्रो गरी सकेको छु।
तपाईको समयको लागि धन्यबाद, साथीहरू।
थोरै अपडेट प्रयोगको पहिलो रात पछि क्रममा छ:
रात ११:१। तिर म ओछ्यानमा उफ्रे र डिलिटा प्लसको बकबक गरें: हेडफोन लगाएर, चश्मा लगाएर मशिन नजिकै। मैले आइकन मूनलाईटमा तेस्रो सत्रमा सत्र सेट गरें, यो निन्द्रा सत्रहरू हो। त्यहाँ प्रत्येक आईकन अन्तर्गत पाँच सत्रहरू प्लस (+) आईकन बाहेक, जुन त्यहाँ तपाईंको आफ्नै पाँच थप्नको लागि हो।
मलाई याद छ कि मुश्किलले उठेको थियो र हेडफोन र चश्मा हटाउँदै, त्यसपछि निदाएकोमा। म आज बिहान :8:२:25 बिहान उठेँ, पूर्ण आराम पाएको महसुस गरें। मसँग त्यस्तो मस्तिष्कको मृत अनुभूति थिएन, जस्तो कि मसँग सामान्यतया कुनै निद्रा नभएको बेला, वा आंशिक निद्रा नभएको।
म जानको लागि ओछ्यानबाट माथि चढें र ऐनामा हेराई यस दृश्य दृश्यहरू हेर्नका लागि - कुनै झुकाव अनुहार, कुनै थकित आँखाहरू, आँखामुनि कुनै हल्का झोला: जुन सबैले स indicates्केत गर्दछ कि म मेरो टाउकोमा आराम गरिरहेछु- सही थियो। तर, मैले अहिले सम्म गरिन।
मैले पछाडि जान र डिलीट प्लसमा बिहान झिसमिसे जान्ने निर्णय गरें, र मूड सत्रहरूका लागि गएँ, जुन मैले तेर्सो सत्रमा सेट गरें।
मुड सत्रबाट पार गरिसकेपछि, मैले सबै टाढा राखें, कोठामा सबै सीधा गर्न थाले। मैले केहि मिनेट पछि याद गरें, मैले मुस्कान लगाएको थिएँ? यो केवल डिललाईट प्लसबाट हुनसक्थ्यो। स्पष्टतया, मूड सेसनले हल्का उदासीनतालाई सीमा रेखा खुशीमा बदल्न मात्र पर्याप्त थियो। "
Oysten Notvedt बाट प्रशंसापत्र
फेब्रुअरी 6, 2013
“म जति सक्दिन मलाई सम्झना छ, निदाएको साथ संघर्ष गर्दैछु। एक खरीद पछि ओएसिस प्रो र दुई महिना को लागी प्रयोग गरेर, म निश्चित रूपमा भन्नेछु कि यो निदाउन लाग्ने समय काफी कम भएको छ। म पहिलो बारेमा सुन्दा जब शुरूमा धेरै शंकास्पद थियो CES, तर तब मैले हालको वैज्ञानिक साहित्यहरूमा जान खोजें र यसलाई आशाजनक फेला पारे (धेरै नियन्त्रणित अध्ययनहरू प्रकाशित नभए पनि)। साहित्य समीक्षा गरिसकेपछि र आफैं यन्त्र प्रयोग गरेपछि, मैले यो निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ CES अधिक राम्रोसँग ज्ञात हुनुपर्दछ, र अधिक र ठूला अध्ययनहरूको लागि लगानी गरिनु पर्छ ताकि यसले थप ध्यान दिन सक्दछ। मैले केही इयरलोब इरिटेशन बाहेक कुनै साइड इफेक्टहरू देखेको छैन (जुन हो, कडा शब्दमा भन्नुपर्दा, मेरो आफ्नै गल्तीले अधिक तीव्रता सेट गर्दै)। मैले कुनै खरीद गर्नु भन्दा पहिले मैले धेरै CES उपकरणहरू तुलना गरें, र मैले ओएसिस प्रो छनौट गरेको कारण यो थियो कि यसमा सब-डेल्टा सेटिंग र १०० हर्ट्ज सेटिंग्स थियो जुन दुई फ्रिक्वेन्सीहरू हुन् जसलाई वैज्ञानिक प्रमाणहरूले समर्थन गरेको छ सर्तमा काम गर्न। अनिद्रा (र अन्य मुद्दाहरूको एक नम्बर)। साथै, मा मान्छे मन जिउँदो एकदम राम्रो गुच्छा हो। "
Alan Mauro बाट प्रशंसापत्र
18 सक्छ, 2012
“मैले ओएसिस प्रो खरीद गर्‍यो र मलाई यो देखिन्छ कि डेभिड सीभरले अझ राम्रो माउस जाल बनाएको छ। १०० हर्ट्जको प्रयोग गर्दै। सेटिंग्सले मेरो निद्रा पुनर्स्थापित गर्यो, पहिलो प्रयोग पछि। मैले १०० हर्ट्जमा प्रयास गरेको छु। इकाइ पहिले, तर यो केवल भिन्न छ ... यसले काम गर्दछ! तपाईको सहयोगका लागि पुन: धन्यबाद र CES को क्षेत्र मा प्रतिभा प्रयोगको लागि डेभिड धन्यवाद। "
स्यान्टियागो ब्रान्ड, न्युरोथेरापिस्टबाट प्रशंसापत्र
“एक बर्ष भन्दा अघिनै, म आफ्नो जीवन बचाउन निद्रामा परेन। म हरेक रात धेरै चोटि उठ्थें। जब म साँझ नउठाईकन "सुत्" गर्न सक्दछु, म थाँहा भएर उठ्थें, मानौं म रेलबाट ओर्लिएको छु। तसर्थ, भोलिपल्ट, म थाकेको महसुस गराउनेछु र धेरै चिढचिलो हुन थालें। मेरो एक सहकर्मीले सिफारिस गरे कि म व्यबहारको साथ कामका लागि गियर प्रयोग गर्न चाहेको हुनाले मैले डेवसँग सम्पर्क राखें। मैले आफ्नै लागि डेभिड किन्ने निर्णय गरें। मैले प्रयोग गरेको पहिलो रात, मलाई यो याद आयो, "कुनै पनि तरीकाले म सुत्ने छैन यी बत्तीहरू यति उज्यालो र यी टोनहरू भएकोले।" त्यस पछि, अर्को कुरा जुन मँ सम्झन्छु त्यसले उठेको ताजा र उत्साहित थियो; महिनौं भइसकेको थियो जब म वास्तवमा सुत्न सक्थें! अब म मेरो डेभिड एक बर्ष भन्दा बढी प्रयोग गर्दैछु र मलाई सम्झन सक्दिन जब म अन्तिम पटक निदाउन सकेन। म अझ बिस्तारै काम गर्न जानु अघि बिहान पनि यसलाई प्रयोग गर्छु, जबकि दिउँसो खाजा आरामको लागि मेरो झपकी लिन्छु र पढ्न र अध्ययन गर्दा बढी रमाइलो र केन्द्रित हुन्छु। यो उपकरणले मेरो जीवन परिवर्तन गरेको छ!
अब, म दृढताका साथ मेरा ग्राहकहरु लाई सिफारिस गर्दछु कि उनीहरूले एक प्राप्त गरे; तिनीहरू मध्ये धेरै छन् र खुशी छन् उनीहरूले। यस्तो अद्भुत उत्पादन सिर्जना गर्नु भएकोमा धन्यवाद! "
डेल सी बाट प्रशंसापत्र।
अगस्ट 19, 2008
“म मेरो DAVID प्रयोग गर्दैछु दिउँसो नप लिनका लागि। यो अद्भुत काम गर्दछ !! पहिले, मेरो दिमाग रेसि be हुने थियो र म थकित भए पनि म निन्दै लिन सक्दिन। म यसलाई मेरो 'पावर नेप' भन्छु। यो साँच्चिकै राम्रो छ! ”
ब्रायन जे। मुनरोबाट प्रशंसापत्र
बाल्गनी, सास्काचेवान, क्यानडा
अगस्ट 14, 2007
"तपाइँको शीघ्र जवाफ र उत्कृष्ट ग्राहक सेवा को लागी धन्यवाद।
चासोको विषयको रूपमा, मलाई भर्खरै गम्भीर निद्रा एपनिया पत्ता लागेको थियो। परीक्षण गर्न लगभग एक बर्ष पर्खेर, मैले मेरो निद्रा चक्र एक घण्टाको बारेमा १ 140० पटक अवरोध भइरहेको पाए। मलाई लाग्छ कि बितेका केही वर्षहरूमा मेरो डेभिड पाललाई धन्यवाद छ कि म कुनै निद्रा पाउन सक्दछु - वा दिनमा "ब्रेन ब्राइटनर" सत्र प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छु र त्यसैले ड्राइभि like जस्ता कार्यहरू गर्न सक्षम हुन्छु। लामो दूरीसम्म निदाउन र म आफैं वा मेरो परिवारलाई चोट पुर्‍याएनन्।
सीपीएपी युनिटको संयोजनको लागि मलाई मेरो डाक्टरले मेरो निन्द्रा श्वास लाग्ने शल्यक्रिया हटाउन सल्लाह दिएका थिए, र मेरो PAL इकाई, अब म हरेक रात to देखि hours घण्टा गहिरो, पूर्ण र आरामदायी निद्राको आनन्द लिइरहेको छु! मेरो उर्जाको स्तर माथि छ, मेरो मानसिक तीक्ष्णता राम्रो छ र मेरो भावनात्मक अवस्था बढी सकारात्मक छ।
जब कोहीले मलाई निन्द्रा, मानसिक फोकस र / वा यी मुद्दाहरूसँग सम्बद्ध भावनात्मक स with्घर्षको समस्याको बारेमा बताउँछ, म तिनीहरूलाई तपाईंका उत्पादनहरू र उनीहरूसँगको मेरो अनुभवको बारेमा बताउँछु। तपाईंको उत्पादन मेरो लागि काम गर्दछ र मेरो जीवन यसको लागि उत्तम हो। "
फ्लोरेन्स नाय क्लेमेन्टबाट प्रशंसापत्र
बेनिसिया, क्यालिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
जुन 22, 2006
“मैले डेभिडलाई नौ दिनको लागि प्रयोग गर्दैछु, र यसले मलाई मेरो निन्द्राको पुनः पैटर्न दिन र चिन्ता कम गर्न मद्दत गरिसकेको छ। यस्तो अद्भुत उत्पादनको लागि धन्यबाद। मलाई लाग्छ मेरो डेभिड मेरो स्वास्थ्यमा फर्कने मुख्य कारक हुनेछ। ”
वेन सिमबाट प्रशंसापत्र
अल्बर्ट ली, मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका
जुन 5, 2002
“मेरो मुटुको चोटपटक र डबल बायपास सर्जरी पछि मलाई गम्भीर निद्रा समस्याहरू भयो। ब्यूँझनु भन्दा दुई घण्टा भन्दा पहिले म सुत्न सकेन, निद्रामा फर्किन असमर्थ। म धेरै व्यायाम (नियमित शारीरिक उपचार जाँदैछु) सहित शारीरिक सुस्त बनाउनको लागि धेरै निद्रा उपचारहरू कोसिस गर्‍यो। रातमा ब्यूँझने बित्तिकै, म आफूलाई निन्द्रामा राख्नको लागि कहिलेकाँही पढ्ने गर्छु (कहिलेकाँही एक घण्टा वा बढी) र अझै निद्रामा फर्किन सक्दिन। प्रत्येक रात घण्टा खेल्ने र घुम्ने र दिनको समयमा चिढचिढ हुनु मेरो लागि वा मेरो परिवारको लागि रमाईलो थिएन।
मेरी छोरी, Andrea Sime, सुझाव कि म DAVID प्रकाश र ध्वनि एकाई को उपयोग गर्न को लागी सल्लाह दिए। लगभग तुरुन्तै मैले राम्रो निदाउन थाले। म यसलाई दिनको समयमा एक वा दुई चोटि प्रयोग गर्दछु, र फेरि राती सुत्नु अघि फेरि मलाई रातमा to देखि hours घण्टा सुत्ने अनुमति दिन्छ। मैले हालसालै मेरो rd 83 औं जन्मदिन मनाइसकेको हुनाले म बाथरूममा जानको लागि रातमा तीन देखि चार पटक उठ्नुपर्दछ, तर अब म तुरुन्तै निदाउन सक्दछु। यदि मसँग केही जागृति छ भने, म केवल २० मिनेटको डेभिड प्रोग्रामहरू मध्ये एक प्रयोग गर्दछु र निद्रामा जान र विश्राम महसुस गर्न सक्दछु।
फेरि एक पटक पूर्ण रातको निद्रा प्राप्त गर्न पाउँदा म खुसी छु, म मेरो DAVID सँग कुनै पनि रकममा भाग लिने छैन। केही हप्ता पहिले, ईरफोनको एक तर्फको तार जडान छोटो विकसित भयो। उनीहरूले मलाई युनिट मर्मतका लागि फिर्ता पठाउन चाहन्थे। मैले प्रतिस्थापन एकाई पहिलो प्राप्त गर्ने कुरामा जिद्दी गरें, किनकि म फेरि यो एकाईबिना हुन चाहन्न। निद्रा समस्या भएको कसैलाई पनि म यो सिफारिश गर्दछु। ”
Gina Varty बाट प्रशंसापत्र
अप्रिल 29, 1999
"Fibromylagia को उपचारको रूपमा DAVID को उपचारात्मक प्रभावकारिताको परीक्षणको लागि आफ्नो अनुसन्धान प्रोजेक्टमा भाग लिने अवसरको लागि धन्यबाद।
मैले डेभिडसँग मेरा सत्रहरू धेरै फाइदाजनक भएको पाए, विशेष गरी मलाई निद्राको लागि तयार पार्न। डेभिडले मलाई शान्त, आराम गर्ने, र केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्‍यायो, ताकि म सुत्न अझ तयार भएँ।
फ्ल्याशिंग लाइट संयोजन र पल्सिंग टोनको विविधताले कार्यक्रम चयन गर्न अवसर प्रदान गर्‍यो जुन मेरो मुडसँग मिल्छ र विशेष समयमा आवश्यक हुन्छ।
यस्तो रोचक डिजिटल अडियो-भिजुअल एकीकरण उपकरण अनुभव गर्न र अध्ययनमा योगदान पुर्‍याउने मौकाको लागि फेरि धन्यबाद। "
कोलेट स्मिथबाट प्रशंसापत्र
लेडुक, अल्बर्टा, क्यानाडा
फेब्रुअरी 3, 1997
“म चार वर्षको हुँदादेखि मलाई निद्रामा समस्या भयो। यो मलाई लाग्छ, औसतमा, एक रातमा एक रात निदाउन। जतिसक्दो चाँडो म दुई घण्टा भन्दा बढि ओछ्यानमा ढल्नेछु, टस गर्दै र टर्निंग। मलाई निद्रामा मद्दत गर्न मैले विभिन्न औषधीहरू प्रयोग गरेको थिएँ, तर म सँधै 'ह्या hang्गओभर' प्रभावको साथ ब्यूँझन्छु - म आफ्नै ठाउँमा निदाउन कोसिस गरेको भए भन्दा म थाकेको थिएँ। म एक दर्ता नर्स हुँ, त्यसैले अन्यहरू उनीहरूको सुरक्षा र कल्याणको लागि ममा निर्भर छन्। म काम गरेको बेलामा निन्द्रा लाग्न सक्दिन।
म सुरुमा अध्ययनको बारेमा शंका गर्थें, तर निन्द्राको आवश्यकता मेरो सन्देहवाद भन्दा कडा थियो। कुनै पनि औषधी समावेश थिएन भन्ने तथ्यबाट म आकर्षित भएँ। मैले पहिले भनेझैं, औषधिले मलाई निन्द्रामा मद्दत पुर्‍यायो, तर भोलिपल्ट बिहान मलाई टसिंग र मोड्न निकै राम्रो लाग्यो, निदाउन पर्खाइमा।
अध्ययनको भागको रूपमा, डेभिड प्रयोग गर्नु अघि, मैले मेरो 'सामान्य' निद्रा बानीमा दुई हप्ता ट्र्याक राख्नु पर्‍यो। परिणाम सामान्य औसतमा थिए, हरेक रात निदाउनमा मलाई एक घण्टा वा बढी लाग्नेछ। जुन दिन मैले डेभिड घर लिएको थिएँ, मैले सुत्ने बेला भन्दा पहिले बत्तीहरू र श of्काको संवेदनासँग परिचित हुन विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यसलाई प्रयास गरें। जब मैले पहिलो रात मेशिन प्रयोग गरें, म minutes० मिनेटमा निदाएँ! मेरो लागि, त्यो लगभग एक रेकर्ड थियो। मैले २० मिनेटको कार्यक्रमको लागि मेसिनलाई प्रोग्राम गरेको थिएँ, र कार्यक्रम बन्द भएपछि पनि ब्यूँझिएको थियो, तर जब मैले हेडफोन र चश्मा लिएँ र आराम गरेँ, मेरो दिमाग रेसि start हुन सकेन! मँ चुपचाप आराम गरे, र मेरो आफ्नै २० मिनेट पछि निदायो।
त्यो पहिलो रात पछि, म झट्टै निदाउन थाले। म २० मिनेट वा कममा नियमित रूपमा निदाइरहेको थिएँ। म machine० मिनेटको कार्यक्रमको लागि मेशीन प्रोग्राम गर्दछु, तर कार्यक्रम समाप्त भएपछि म सायद बिरोध हुन्छु। म मध्यरातमा मात्र उठ्नेछु, चश्मा र हेडफोनहरू हटाउनेछु र सुत्न जान्छु। मध्यरातमा फोन उठाउने वा वाशरूम प्रयोग गर्नका लागि ब्यूँझिए पनि म फेरि फेरि निदाउन सक्छु। मैले मेरो मुड सुधार भएको देखेको छु - मलाई क्लिनिकल डिप्रेशनको बारेमा करीव पाँच वर्षदेखि समस्या आएको थियो, र मेरो एकाग्रता बढाइएको थियो। पहिलो चोटि मैले सम्झिनको लागि, म बिहान उठ्छु र आराम महसुस गर्छु।
मेरो कामको भागको रूपमा, म हप्तामा तीन वा चार दिन शहर बाहिर हुन सक्छु, र होटल कोठामा रातभर बस्न सक्छु। सामान्यतया, मलाई एक अनौंठो पल .मा सुत्न कम्तिमा दुई घण्टा लाग्छ। डेभिडको साथ, म अझै पनि औसत २०--20० मिनेटमा निदाउन सक्छु। डेभिड मसँग प्रान्त भर र ब्रिटिश कोलम्बिया गए जब म अध्ययनको क्रममा थिएँ। एक पटक मात्र, सबै रातहरूमा मैले अनौंठो खाटमा बिताए (अध्ययनको क्रममा १ 30-२० रातहरू), के मलाई निदाउन समस्या भयो?
जब मैले DAVID को प्रयोग गर्न छाडेँ र अध्ययन पूरा गर्न 'मेरो आफ्नै' निद्रामा फर्कनु पर्‍यो, म आशावादी थिए कि मेरो मस्तिष्क सुत्रामा सुध्रिने 'प्रोग्रामेड' भएको थियो, मलाई कुनै समस्या थिएन। दुर्भाग्यवस, त्यो त्यस्तो थिएन। मेरो पुरानो निन्द्रा फर्कियो, र मेरो दिमाग फेरि दौडिरहेको थियो। निदाउन समस्या हुनबाट जोगिनको एक मात्र उपाय भनेको राती अबेर सम्म बस्नु र आफैलाई थकित पार्नु हो। त्यसो भए म एक घण्टा भित्र निदाउन सक्छु। मलाई फेरि एकाग्रता समस्या आउन थाले, र मेरो मुड बढी भयो निराश र चिढचिलो जब अध्ययनको अन्त आएको थियो, म निराश महसुस गर्दै थिएँ। मलाई मेरो निन्द्रा चाहियो। मैले महसुस गरेको एक मात्र विकल्प मेरो आफ्नै प्रयोगको लागि मेशीन किन्नु थियो। त्यसोभए, मैले अध्ययन पूरा गरेपछि घरमै प्रयोग गर्न मैले आफ्नै DAVID मेसिन खरीद गरें। हरेक रात मैले मेसिन किनेको हुनाले, म आधा घण्टा भित्र निदाएको छु। मेरो लागि यो कुनै चमत्कार होईन।
म सुत्नको लागि DAVID मात्र प्रयोग गर्दिन। मैले विभिन्न कार्यक्रमहरू रमाईलो गर्न, वा मलाई व्यस्त दिनमा फोकस गर्न मद्दतको लागि पनि सहयोगी पाएको छु। एक पटक, जब म मेरो कामको साथ यात्रा गर्दै थिएँ, अर्को स्टाफ सदस्यले माइग्रेनको टाउको दुखाइको विकास गरे। सामान्यतया, उनी एक पटकमा दिनको लागि ती टाउको दुख्ने गर्दछन्। मैले उनलाई आराम गर्ने क्रममा डेभिडको प्रयास गर्न दिएँ, र जब कार्यक्रम समाप्त भयो, उनको टाउको दुखाईमा ठूलो परिमाणमा घटेको थियो। उनी अब असहाय महसुस गर्छिन्, र त्यो दिउँसो काम गर्न सक्षम थियो। अर्को दिन, टाउको दुख्यो।
मलाई खुशी छ कि म मेरो सन्देहनालाई जित्न सफल भएँ र डेभिड अध्ययन गर्ने प्रयास गरें। म अब दिनको अन्त्य र निदाउन को लागी को लागी डर लाग्छ। म भर्खरको ओछ्यानमा जान्छु, DAVID खोल्नुहोस् र सहज हुनुभयो। निद्रा आफै आउँछ। ”
कला Meizner बाट प्रशंसापत्र
कनेक्टिकट, संयुक्त राज्य अमेरिका
जुन 2, 1995
“मैले सुरुमा त्वरित सिक्नको लागि DAVID किनेको… तर चाँडै यसको अन्य क्षेत्रहरूमा यसको उपयोगिता पनि महसुस गरें। मेरो जीवनभर निद्रा विकार भएको छ, मैले हेमस्टेप / डेल्टा सत्र प्रयोग गर्‍यो, र यसले मलाई शान्तिमय, रिलक स्थितिमा पुर्‍यायो। सत्र समाप्त हुनुभन्दा पहिले नै म छोड्छु। ”
जॉर्ज Suarez बाट प्रशंसापत्र
“म यस्तो अद्भुत मेसिन उत्पादन गरेकोमा तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, म अझ राम्रो निदाउँदिन, तर म सबै कुरा राम्ररी गर्दछु, म हक छु। "
बेन स्वानसनबाट प्रशंसापत्र
“म भन्ने गर्छु कि जब म सामान्यतया ओछ्यानमा जान्छु जब यो मेरो पा whe्ग्राहरू घुम्न थाल्छ र निदाउन मेरो लागि गाह्रो काम थियो। जब म अन्ततः निदाए यो कहिल्यै आरामदायी निन्द्रा थिएन। डेभिड उपकरण प्रयोग गर्नाले मलाई रातमा वा दिन प्रयोग गर्दा साँच्चिकै आराम गर्न मद्दत पुर्‍यायो। यसले धेरै सजिलै निदाउन अनुमति दियो र आरामको पनि गहिरो अवस्था थियो। मलाई लाग्छ यो मेरो जीवनको राम्रो गुणस्तरको लागि महत्वपूर्ण थियो किनकि यसले दिनभरि मलाई बढी ऊर्जा प्रदान गर्‍यो। मसँग सामान्यतया एकदम छोटो स्वभाव हुन्छ। मैले अनुभव गरेको राम्रा बाँकी ढाँचाले मलाई परिस्थितिलाई बढी सकारात्मक तरीकाले व्यवहार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। मेरो सामाजिक जीवन, फोकस र ध्यान, सतर्कता, पीडा - केहि राम्रो थियो (यो कहिलेकाँही ह्वाप्लाश आराम थियो), मुड - सबै माथिको यस उपकरण प्रयोग गरेर केही सुधार भएको थियो। यसले केवल भावना राख्छ हामी एक धेरै तनावग्रस्त समाज हुन जान्छौं धेरै जसो मानिसहरूले सोच्दैनन् कि उनीहरू कति तनावपूर्ण छन्। यो मेसिनले तपाईंलाई आराम गर्न दिन्छ। ”